Ahia ahia - Njikwa ọdịnaya dị mfe | Martech Zone
Ahia ahia - Njikwa ọdịnaya di mfe
Saturday, October 24, 2009 Tọzdee, Disemba 5, 2013 Douglas Karr
Ọnwa ole na ole gara aga, m gara leta ndị egwuregwu Uzo ahia ma nwee ngosipụta nke Software ha dị ka Ọrụ (SaaS) Content Management System (CMS) - nke gunyere ma ecommerce na usoro ịde blọgụ. Anụrụ m ọtụtụ ihe banyere ụlọ ọrụ mana ọ dị mma na m mechara nweta ngosi ma hụ ihe ha rụzuru.
Matt Zentz bụ otu n'ime ndị na-arụkọ ọrụ ahịa Marketpath ma rụọ ọrụ na ExactTarget azụ na ụbọchị mbụ ya. Ọ naghị ezochi eziokwu ahụ bụ na enwere mmetụta dị mfe ha site n'oge ya Kpọmkwem Ngwaọrụ. Ọ bụ ezigbo mma. Imirikiti usoro njikwa ọdịnaya chọrọ n'ezie usoro mmụta mmụta dị elu iji gafere. Marketpath emeela ka nke ha dị mfe ma dịkwa mfe iji. Ọ bụrụ na ịmara otu esi emeghe mmemme na Windows ma ọ bụ na Mac, ị ga-enwe ike iji MarketPath.
Nseta ihuenyo nke Marketpath CMS Administration
Nseta ihuenyo nke Marketpath CMS Editor
Nseta ihuenyo nke Marketpath CMS Security
Nseta ihuenyo nke Marketpath CMS Google Analytics
Dịka i si hụ na screenshots, ọ bụ ngwa dị mfe iji - ma ị nwere ike iji ya wuo ebe nrụọrụ weebụ dị mgbagwoju anya na ụlọ ahịa n'ịntanetị. Ihe osise Harry Potter Wall bụ onye ahịa ahịa nke Marketpath na-adịbeghị anya nke na-eleba anya na kpụ ọkụ n'ọnụ isiokwu gị nwere ike ịnweta yana otu esi enweghị enweghị ebe saịtị na ecommerce dị.
Mgbe ị nọ na Marketpath, DK New Media nyere ụfọdụ nzaghachi na saịtị ahụ na njikarịcha maka search. Enwere m mmasị inyere ndị ụlọ ọrụ mpaghara anyị aka ma enwere ọtụtụ nkwa na azịza Marketpath!
Marketpath nwere oke otu na nnukwu ihe ngwọta. Ọ bụrụ n’ikpebie ịkpọ ha oku, gbaa mbọ hụ na ha mere ka ị mata na ị gụrụ maka azịza ha Martech Zone!
Tags: CMSọdịnaya managementusoro njikwa ọdịnayaecommerce n'elu ikpo okwuahịasaasnke cms
bing + twitter = ezigbo oge nyocha
Ebee ka Isi Nkwukọrịta Email Na-aga?